နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးနှင့်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ | NLD
Home Appointment နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးနှင့်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးနှင့်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး H.E. Mr. Asaduzzaman နှင့်အဖွဲ့အား ယနေ့နံနက် (၁၀)နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
တွေ့ဆုံစဉ် အိမ်နီးချင်းနှစ်နိုင်ငံအကြား ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည့် နယ်စပ်ဒေသလုံခြုံရေး နှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ အပေါ် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာနှင့် အတူတကွ ဖြေရှင်းသွားနိုင်မည်ဟု ခိုင်မာစွာ ယုံကြည်ကြောင်းနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက်သို့ မြန်မာဘက်မှ ရောက်ရှိနေသူများအား ပြန်လည်စိစစ်လက်ခံရေးနှင့်ပတ်သက်၍ နှစ်ဖက်ဆက်လက် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားမည့်ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျဘင်ျဂလားဒရှေျ့ပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ၊ ပွညျထဲရေးဝနျကွီးနှငျ့အဖှဲ့အား လကျခံတှဆေုံ့
နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ၊ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန၊ ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျသညျ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ ပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ၊ ပွညျထဲရေးဝနျကွီး H.E. Mr. Asaduzzaman နှငျ့အဖှဲ့အား ယနနေံ့နကျ (၁၀)နာရီတှငျ နပွေညျတျောရှိ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန၌ လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
တှဆေုံ့စဉျ အိမျနီးခငျြးနှဈနိုငျငံအကွား ဖွဈပျေါလကျြရှိသညျ့ နယျစပျဒသေလုံခွုံရေး နှငျ့ တရားဥပဒစေိုးမိုးရေးဆိုငျရာ ကိစ်စရပျမြား အပျေါ ခဈြကွညျရငျးနှီးစှာနှငျ့ အတူတကှ ဖွရှေငျးသှားနိုငျမညျဟု ခိုငျမာစှာ ယုံကွညျကွောငျးနှငျ့ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ ဘကျသို့ မွနျမာ ဘကျမှ ရောကျရှိနသေူမြားအား ပွနျလညျစိစဈလကျခံရေးနှငျ့ပတျသကျ၍ နှဈဖကျဆကျလကျ ပူးပေါငျး ဆောငျရှကျသှားမညျ့ ကိစ်စရပျမြားကို ဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် တည်ထောင်ခြင်း ၂၉ နှစ်ပြည့် အခမ်းအနားသို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင် ဦးဉာဏ်ဝင်းတက်ရောက်
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျာမနီနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ